Ixesha kunye nabahlobo 51
Iyintoni imfundiso yemfundiso yokucamagusha, kwaye ingadibana njani nomthetho we-karma?
Ukuba ukucanyagushelwa kuthathwe ngokwenyani, kwaye izizathu ezibanga ukuba zenze ucamagushelo ziyimfuneko ukuba ziqwalaselwe ngokoqobo, akukho ngcaciso ichazayo yemfundiso; Akukho nkcazo inokuba isengqiqweni. Imfundiso ayisiyongqondo. Zimbalwa izinto kwimbali ezinobugwenxa bokungalunganga, ngoko-barbaric kunyango, ukrokreleka ukuba nengqondo kwaye kufanelekile okusesikweni, njengemfundiso yokucamagushela. Imfundiso yile:
NguThixo okuphela kozelweyo, ohleli kuwe lonke ixesha, wadala amazulu nomhlaba nazo zonke izinto. UThixo wamdala umntu ukuba abe msulwa kwaye angazi nto, kwaye wambeka kumyezo owonwabisayo ukuba uhendwe; Wamdala ke yena uThixo. kwaye uThixo waxelela umntu ukuba, xa athe wahendela kwisilingo, uya kufa ngokuqinisekileyo. UThixo wamenzela umfazi uAdam, basitya ke eso sithixo singabalelanga ukuba basidle, kuba bona babekholelwe ukuba kukutya okulungileyo. Ke uThixo waqalekisa umhlaba, waqala ke wabaqalekisa uAdam noEva, wabagxotha emyezweni, baqalekisa abantwana abaza kubavelisa. Kwaye isiqalekiso sosizi kunye nokubandezeleka nokufa konke kwabakho kuluntu lonke elizayo ngenxa yokutya kuka-Adam no-Efa kwiziqhamo ababenqunyelwe nguThixo ukuba basidle. UThixo wayengenakukwenza okanye ukungasitshitshisi isiqalekiso sakhe, kude kube, njengoko watshoyo, “wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo,” uYesu, njengedini legazi lokususa isiqalekiso. UThixo wamkela uYesu njengocamagushelo ngesenzo esiphosakeleyo sabantu phantsi kokuba "wonke umntu okholelwa kuye angatshabalali," kwaye ngesithembiso sokuba ngokholo olunjalo “banokuphila ngonaphakade.” Ngenxa yesiqalekiso sikaThixo, umphefumlo ngamnye awenzileyo kuba wonke umzimba owazalelwa ehlabathini wawuphunyezwa, nomphefumlo wonke awudalayo, uya kubandezeleka ehlabathini. Kwaye, emva kokusweleka komphefumlo umphefumlo uphunyelwe esihogweni, apho unokungafi, kodwa kufuneka uhlupheke, ngaphandle kokuba loo mphefumlo ungaphambi kokuba ufe, uzikholelwa ukuba ungumoni, kwaye ukholelwe ukuba uYesu weza kuwusindisa ezonweni zawo. ; ukuba igazi awathi ngalo uYesu waliphalaza emnqamlezweni lixabiso elamkeleka kuye unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, njengentlawulelo yesono kunye nentlawulelo yomphefumlo, kwaye ke umphefumlo uya kwamkelwa emva kokufa ezulwini.
Kubantu abakhuliswe phantsi kweempembelelo zakudala ezintle zeecawe zabo, kwaye ngakumbi ukuba abaqhelanga nemithetho yesayensi, ukuqheleka kwabo ngezi nkcazo kuyakuthambela ukungabikho kwendalo kubo kwaye kubathintele ekubonakala ngathi kuyinto engaqhelekanga. Xa bevavanywa ngelokuqiqa, babonwa kukuzifihla kwabo, kwaye ayingabo bonke umlilo otshisayo wesihogo onokumthintela lowo ubonayo ukuba angayamkeli imfundiso enjalo. Kodwa oyichasayo imfundiso le, makangamkhalimeli uThixo. UThixo akanoxanduva kwimfundiso.
Imfundiso yokoqobo yocamagushelo ayinakuze nangayiphi na indlela ixolelaniswe nomthetho wekarma, kuba ke ukucanyagushelwa bekuya kuba sesinye seziganeko ezingenabulungisa nezingenangqondo ezake zabhalwa, ngelixa ikarma ingumthetho wokusebenza wobulungisa. Ukuba intlawulelo yayisisenzo sobulungisa, loo nto ibiya kuba yinto egwenxa kwaye ingalunganga kunezenzo ezigwenxa zomntu. Uphi utata onokunika unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuba atshutshiswe aze abethelelwe emnqamlezweni, abulawe, ngamanxeba amaninzi enziwe yedwa, kwaye yena, ngenxa yokungazi kwakhe ukubabenza benze ngokuhambelana nolonwabo bakhe, isiqalekiso sentshabalalo kubo; emva koko wayeguqukile kwisiqalekiso sakhe kwaye wavuma ukuba abaxolele ukuba bayakukholwa ukuba ubaxolele, nokuba ukubulawa kwakhe nokuphalazwa kwegazi lonyana wakhe bekuxolelwe kwizenzo zabo.
Akunakwenzeka ukuba ucinga ngekhondo elinjalo lesenzo njengelaphezulu. Akukho mntu wayenokuyikholelwa into yokuba ngumntu. Wonke umntu othanda ukudlala okusesikweni nobulungisa uya kuba nemfesane ngoonyana, avelane, abe nobubele kunyana, afune isohlwayo kuyise. Umthandi wobulungisa unokuhlekisa ngombono wokuba i-manikins ifune ukuxolelwa ngumenzi wayo. Uya kunyanzelisa ukuba umenzi afune ukuxolelwa xa bezenzela imanikins, kwaye ke uya kunyanzelisa ukuba umenzi ayeke kwaye alungise iimpazamo zakhe ezininzi kwaye enze kakuhle zonke iimpazamo azenzileyo; ukuba kufuneka aphelise lonke usizi kunye nokubandezeleka awaziswayo emhlabeni kwaye awathi wayenolwazi lwangaphambi kwexesha, okanye ngenye indlela, ukuba kufuneka anike i-manikins yakhe, hayi nje amandla okuqiqa ngokwaneleyo buza ubulungisa kwezomthetho wakhe, kodwa ngobukrelekrele obaneleyo ukuze babone ubulungisa kule nto ayenzileyo, ukuze babe nokuthabatha indawo yabo emhlabeni kwaye baqhubeke ngokuzithandela nomsebenzi ababelwe wona, endaweni yokuba babe ngamakhoboka, Abanye babo babonakala bonwabile ubunewunewu obungafundanga kunye nobumnandi, izikhundla kunye nezibonelelo ezinokubanika ubutyebi kunye nokufuya, ngelixa abanye beqhutywa ebomini yindlala, usizi, ukubandezeleka kunye nezifo.
Kwelinye icala, akukho mfuziselo okanye inkcubeko iywaranti eyaneleyo yokuba indoda ithi: umntu yimveliso yendaleko; indalo sisenzo okanye sisiphumo sesenzo samandla angaboniyo kunye nemicimbi engaboniyo; Ukufa kuphela konke; akukho sihogo; akukho msindisi; Akukho Thixo; akukho okusesikweni kwindalo yonke.
Kusengqiqweni ukuthi: kukho okusesikweni kwindalo iphela; kuba okusesikweni linyathelo elifanelekileyo lomthetho, kwaye indalo iphela mayigcinwe ngumthetho. Ukuba umthetho uyimfuneko ukuze kusebenze ivenkile yomatshini ukuthintela ukuba uqhume, umthetho awukho mfuneko kangako ekusebenzeni koomatshini bendalo. Akukho ziko elinokwenziwa ngaphandle kokukhokelwa okanye ubukrelekrele obubumbeneyo. Kufuneka kubekho ubukrelekrele kwindalo iphela ngokwaneleyo ukukhokela ukusebenza kwayo.
Kufanele ukuba kubekho enye inyani kwinkolelo yokucamagushela, esele ihleli kwaye ifumanekile yamkelekile ezintlokweni zabantu phantse iminyaka engamawaka amabini, kwaye namhlanje ibala izigidi zabaxhasi. Imfundiso yocamagushelo isekwe kwenye yeyona nyaniso isisiseko yendaleko yomntu. Le nyaniso yagqitywa kwaye yajijiswa ziingqondo ezingafundiswanga kwaye ezingaphuhliswanga, iingqondo zingenakukhula ngokwaneleyo ukuba ziyifumane. Yayikhuliswa kukuzingca, phantsi kwempembelelo zenkohlakalo nokubulala, kwaye ikhula ikwimo yayo ngoku ukutyhubela iminyaka yobumnyama yokungazi. Ngaphantsi kweminyaka engamashumi amahlanu ukusukela oko abantu baqala ukuthandabuza imfundiso yocamagushelo. Imfundiso iye yaphila kwaye izakuphila ngoba kukho inyaniso ethile kwimbono yobudlelwane bomntu noThixo wakhe, kwaye ngenxa yoluvo lokuzincama ukuze kulungelwe abanye. Abantu ngoku baqala ukucinga ngezi mbono zimbini. Ubudlelwane bomntu noThixo wakhe, kunye nokuzincama ngenxa yabanye, zizo iinyani ezimbini kwimfundiso yokucamagushela.
Indoda ligama eliqhelekileyo elisetyenziselwa ukuyila umbutho wabantu kunye nemigaqo-siseko yawo eyahlukileyo kunye nobume bayo. Ngokwembono yobuKristu, umntu uyinto-ntathu, umoya, umphefumlo nomzimba.
Umzimba wenziwa ngezinto zomhlaba, kwaye zezomzimba. Umphefumlo luhlobo olo lubunjwe kuwo okanye lwenziwa kuwo izinto zomzimba, kwaye ngaphakathi kuluvo. Yengqondo. Umoya bubomi bendalo iphela ongena buwenze buphila umphefumlo kunye nomzimba. Ibizwa ngokuba yeyokomoya. Umoya, umphefumlo kunye nomzimba zenza umntu ongowomntu, umntu ofayo. Ekufeni, umoya okanye ubomi bomntu bubuyela kwindalo iphela; Umzimba wokwenyama, uhlala uphantsi kokufa kunye nongcoliseko, ubuyela ngokwahlulahlula emzimbeni kwizinto ezazibunjwe kuwo; kwaye, umphefumlo, okanye uhlobo lwento yomzimba, ithunzi-elifana nokupheliswa komzimba kwaye ufunxwa zizinto ze-astral kunye nelizwe lemilingo elivela kuyo.
Ngokweemfundiso zobuKristu, uThixo kathathu kuBunye; abantu abathathu okanye izincoko kwimanyano enye yento. UThixo uYise, uThixo uNyana, kunye noMoya oyiNgcwele. UThixo uYise ungumenzi; Unyana kaThixo unguMsindisi; UThixo uMoya oyiNgcwele ungumthuthuzeli; Aba bathathu baphila kobuThixo.
UThixo yingqondo, eyakho, ngaphambi kwehlabathi kunye nokuqala kwalo. UThixo, ingqondo, ibonakalisa njengendalo kwaye njengobuThixo. Ingqondo esebenza kwindalo idala umzimba, ubume kunye nobomi bomntu. Le yimvelo yendoda eselungelweni lokufa kwaye ekufuneka ifile, ngaphandle kokuba ikhuliswe ngaphezulu ekufeni ngokungenelela kobuThixo kwimeko yokungafi.
Ingqondo (“uThixo utata,” “utata osezulwini”) yingqondo ephezulu; ngubani othumela isahlulo esineyakhe, isarha (“uMsindisi,” okanye, “uThixo uNyana”), ingqondo ephantsi, yokuhlala nokuphila emntwini ofayo kangangexesha elithile; emva kwethuba, ingqondo esezantsi, okanye isarha evela phezulu, ishiya umntu ofileyo abuyele kuyise, kodwa ithumele endaweni yayo enye ingqondo ("i-Holy Ghost," okanye, "uMthuthuzeli," okanye "uMthetheleli"), umncedisi okanye utitshala, ukunceda lowo uzuze okanye wamkele ingqondo engenanyama ukuba abe ngumhlanguli wakhe, ukufezekisa umsebenzi wakhe, umsebenzi awayewusebenzele. Umzimba wenxalenye yomqondo wobuThixo, obizwa ngokuba ngunyana wenene, wayekho kwaye unguye okanye unokumkhulula umntu ofayo esonweni, kunye nomhlanguli wakhe ekufeni. Umntu ofayo, umntu wenyama, ekuye kungenile kuye, nokuba ubekhona, uthi, ngokubakho kobuThixo ngaphakathi kwakhe, afunde ukutshintsha, atshintshe, abe kwimeko yakhe yobuntu, nokuba ebenokungafi. Ukuba, nangona kunjalo, umntu akavumanga ukuqhubeka nokuvela kwesidalwa ukuya kwesokungafi, kuya kufuneka aqhubeke nemithetho yokufa kwaye ufanele afe.
Abantu bomhlaba abaveli kumntu ofayo nakumfazi omnye ofayo. Wonke umntu ofayo emhlabeni ongumntu ubizwa ngokuba ngumntu ofayo noothixo abaninzi. Kuwo wonke umntu ongumntu kukho uthixo, ingqondo. Umzimba ngamnye osemhlabeni usehlabathini okwesihlandlo sokuqala, kodwa iingqondo ezisebenzayo, kunye, okanye, ngabantu, abasehlabathini azisebenzi ngoku okokuqala. Iingqondo zenze ngokufanayo neminye imizimba yabantu eyabo kwizihlandlo ezidlulileyo. Ukuba ayiphumelelanga ekusombululeni nasekugqibezeni imfihlakalo yokwenziwa komzimba kunye nokuhlawulelwa ngelixa usebenza kunye nomzimba wangoku womzimba, loo mzimba kunye nefom (umphefumlo, i-psyche) iya kufa, kwaye loo ngqondo inxulumene nayo iya kufuneka iphinde iphinde ibe ngumzimba kwakhona kwaye iphinde ibe kude ulwazi olwaneleyo lwalukho, kude kube kugqityiwe ukuhlawulelwa okanye ukugqibelela.
Ingqondo ebenayo nantoni na emntwini ongumntu ngunyana kaThixo, yiza kuzosindisa loo mntu ekufeni, ukuba umntu lowo uya kuba nokholo ekusebenzeni komsindisi wakhe ukoyisa ukufa ngokulandela uLizwi, lowo usindisayo, ingqondo yomzimba, eyazisa ; Kwaye imfundiso iyaziswa ngokuthe kratya ngokokholo lwendoda kuye. Ukuba umntu wamkela ingqondo yomntu ongaphili njengomsindisi aze alandele imiyalelo ayamkelayo, uya kuwucoca umzimba wakhe ekungcoleni, ayeke isenzo esingalunganga (esona) ngesenzo esifanelekileyo (ukulunga) kwaye uya kuwugcina uphilile umzimba wakhe de abe uyakhulula umphefumlo wakhe, i-psyche, imo yomzimba wakhe wenyama, ekufeni, wawenza wangabinakufa. Eli khondo lesenzo soqeqesho lomntu ofayo nokuluguqula libe kukungafi kukubethelelwa emnqamlezweni. Ingqondo ibethelelwa emnqamlezweni wayo wenyama; kodwa ngokubethelelwa emnqamlezweni ofayo, ngokufa, ukoyisa ukufa nokufumana ubomi bokungafi. Ke into efayo yambatha ukungafi, yaphakanyiselwa kwihlabathi lezinto ezingafiyo. Unyana uthixo, ingqondo yomzimba ongokwasemzimbeni sele ewugqibile umsebenzi wakhe; uwenzile umsebenzi abewenza, ukuze abe nako ukubuyela kuyise osemazulwini, enengqondo ephakamileyo, abe yena emnye. Ukuba, nangona kunjalo, umntu oye wamkela ingqondo yomzimba ongaphili njengomsindisi wakhe, kodwa ukholo okanye ulwazi alukho mgangathweni ngokwaneleyo ukuba alandele imfundiso ayifumeneyo, ke ingqondo yokungafezeki isabethelelwe emnqamlezweni, kodwa kukubethelelwa ngokungakholelwa kunye nokuthandabuza. lomntu ofayo. Kukubethelelwa kwemihla ngemihla apho ingqondo ihlala ikho okanye kumnqamlezo wayo wenyama. Emntwini, ikhosi yile: Umzimba uyafa. Imvelaphi yengqondo esihogweni, ngokwahlulahlula le ngcinga kwiminqweno yenyama kunye neminqweno yenyama ngexesha lokufa. Ukuvuka kwabafileyo, kukwahlulahlula kwiminqweno. Ukunyukela ezulwini apho "abagweba ngokukhawuleza nabafi," kulandelwa kukumisela ukuba yeyiphi na imeko yomzimba ofayo kunye nengqondo, eya kudalelwa ukuzalwa kwakhe okulandelayo emhlabeni, inento yokwenza oko. ukukhanya kunye nokuhlawulelwa.
Kumntu osindisiweyo, onengqondo engokwasemzimbeni esenza ukungafi, bonke ubomi bukaYesu bamele ukuba bugqithile ngeli xesha besaphila kumzimba wenyama okwenyama. Ukufa kufuneka koyiswe ngaphambi kokuba umzimba ufe; Ukudilikelwa esihogweni kufuneka ngaphambi, ekufeni komzimba; Ukunyukela ezulwini kufuneka kufezekiswe ngelixa umzimba wenyama usaphila. Konke oku kufuneka kwenziwe ngesazela, ngokuzithandela, nangolwazi. Ukuba ayisiyiyo, kwaye umntu unenkolelo nje yengqondo yakhe engenasidalwa njengomsindisi, kwaye ukuba, nangona eqonda indlela kodwa engafumani bomi bokungafi ngaphambi kokuba afe, uyafa, ke kwixesha elizayo lokumiliselwa kwimeko yehlabathi kwaye kuloo nto yomntu ofayo, ingqondo ayizukungena kwimo yomntu awayeyibize ukuba ibekho, kodwa ingqondo isebenza njengoMthuthuzeli (uMoya Oyingcwele), olungiselela umphefumlo womntu kwaye othathe indawo yonyana kaThixo , okanye ingqondo, eyayingamzimba wobomi bangaphambili okanye ubomi. Ikwenza oko ngenxa yolwamkelo lwangaphambili lwengqondo lomntu ngunyana kaThixo. NguMthuthuzeli lowo umjikelezayo, lowo ululekayo, ululekileyo, ayalele, ukuze, xa athe umntu wavuma, eqhubeke nomsebenzi wokungafi, oselelwe ebomini.
Abantu abangayi kubuyela elukhanyisweni, kufuneka bahlale ebumnyameni kwaye bagcine imithetho yokufa. Bajongana nokufa, kwaye ingqondo edibene nabo kufuneka idlule esihogweni ebomini, kwaye ngexesha lokwahlukana kwayo nokunxulumana kwayo nasemhlabeni emva kokuba umntu efile, kwaye oku kufuneka kuqhubeke ukutyhubela iminyaka, ide ibe iyavuma kwaye ikwazi ukubona ukukhanya, ukuphakamisa umntu ofayo unokungafi kwaye abe kwindawo enye nomzali wakhe, nguyise osezulwini, onganelisekanga kude kube yilapho ukungazi kubeka ulwazi, kwaye ubumnyama buguqulwa baba kukukhanya. Le nkqubo ichaziwe ngaphakathi iiNdawo zokuPhila eziPhila Ngonaphakade, Vol. I-16, Nos. 1-2, nangaphakathi Amamaxesha nabahlobo eLizwini, Umqu. 4, iphepha 189, kwaye Umqu. 8, iphepha le-190.
Ngale nto yokuqonda imfundiso yecamagushelo umntu angabona ukuba kuthetha ntoni "kwaye uthixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade." Ngale nto yokuqonda, Imfundiso yocamagushelo ihlanganiswe nomthetho wokuhlala ungafezekisi nobulungisa banaphakade, umthetho wekarma. Oku kuyakucacisa ulwalamano lomntu nothixo wakhe.
Inye le nyaniso, umbono wokuzincama ukuze kulungelwe abanye, kuthetha ukuba emva kokuba umntu efumene kwaye elandela ingqondo yakhe, ukukhanya kwakhe, umsindisi wakhe, kwaye ukoyisile ukufa kwaye wafumana ubomi bokungafi kwaye ezazi ukuba akanakufa, uya Ungazamkeli zovuyo zezulu azifumanele yena, kodwa, endaweni yokuba aneliswe loloyiso lwakhe ekufeni, kwaye onwabele yedwa iziqhamo zomsebenzi wakhe, ugqiba ukunika iinkonzo zakhe eluntwini ukukhulula usizi nokubandezeleka, kwaye ubancede bade bafumane isangoma ngaphakathi, kunye nokufikelela kwi-apotheosis ayifikeleleyo. Eli lidini lomntu ngamnye kwisiqu sakho, kwengqondo yomntu ngamnye kwingqondo yendalo iphela. Kukuba uthixo abe ngumntu omnye kuThixo wendalo iphela. Uyabona kwaye azive kwaye uyazi ngokwakhe kuwo wonke umphefumlo womntu ophilayo, nayo yonke imiphefumlo njengakuye. Yinkqubo ye-I-ndingu-Wena kunye Wena. Kule meko kuqondakala ubawo kaThixo, ubuzalwana bomntu, imfihlakalo yokwakhiwa komzimba, ubunye nobunye bezinto zonke, kunye nobunye boLowo.